Amagumbi okudlela (1-14)
Kukalwa izinhlangothi ezine zethempeli (15-20)
42 Ngemva kwalokho yangikhiphela egcekeni elingaphandle ngasenyakatho. + Yangiletha esakhiweni esinamagumbi okudlela esasiseduze kwendawo evulekile, + enyakatho yesakhiwo esiseceleni. + 2 Endaweni yokungena esenyakatho sasiyizingalo* ezingu-100 ubude, ububanzi buyizingalo ezingu-50. 3 Sasiphakathi kwegceke elingaphakathi, elaliyizingalo ezingu-20 ububanzi, + nendawo egandayiwe yegceke elingaphandle. Imipheme yaso yayibhekene futhi iyizitezi ezintathu. 4 Phambi kwamagumbi okudlela kwakukhona indlela yokuhamba yangaphakathi + eyizingalo eziyishumi ububanzi nezingalo ezingu-100 ubude,* izindawo zawo zokungena zazisenyakatho. 5 Amagumbi okudlela esakhiwo aphezulu ayemancane kunalawo asesitezi esiphansi nesiphakathi nendawo, ngoba imipheme yayithatha indawo yawo ethe xaxa. 6 Ayeyizitezi ezintathu ukuphakama, kodwa ayengenazo izinsika njengezinsika zamagceke. Yingakho kwadleka indawo enkulu kuwo kunalawo asesitezi esiphansi nesiphakathi nendawo. 7 Udonga lwamatshe olungaphandle eduze kwamagumbi okudlela ngasegcekeni elingaphandle elalibheke amanye amagumbi okudlela lwaluyizingalo ezingu-50 ubude. 8 Ubude bamagumbi okudlela ayebheke igceke elingaphandle babuyizingalo ezingu-50, kodwa lawo ayebheke indlu engcwele ayeyizingalo ezingu-100. 9 Amagumbi okudlela ayenendlela engenayo ohlangothini olusempumalanga eya kuwo ivela egcekeni elingaphandle. 10 Kwakukhona namagumbi okudlela ngaphakathi kodonga lwamatshe lwegceke ngasempumalanga ngasendaweni evulekile nangasesakhiweni. + 11 Kwakukhona indlela phambi kwawo efana neyamagumbi okudlela asenyakatho. + Ayelingana ngobude nangobubanzi, izindawo zawo zokuphuma nokwakheka kwazo kwakufana. Izindawo zawo zokungena 12 zazinjengezindawo zokungena zamagumbi okudlela ayeseningizimu. Kwakunendawo yokungena ekuqaleni kwendlela, ngaphambi kodonga lwamatshe oluseceleni ngasempumalanga, lapho umuntu ayengangena khona. + 13 Yabe isithi kimi: “Amagumbi okudlela asenyakatho namagumbi okudlela aseningizimu aseduze kwendawo evulekile + angamagumbi okudlela angcwele, lapho abapristi abasondela kuJehova bedlela khona iminikelo engcwelengcwele. + Bayibeka lapho iminikelo engcwelengcwele, umnikelo wokudla okusanhlamvu, umnikelo wesono nomnikelo wecala, ngoba le ndawo ingcwele. + 14 Lapho abapristi bengena, akufanele baphume endaweni engcwele baye egcekeni elingaphandle bengazikhumulanga izingubo abakhonza ngazo + ngoba zingcwele. Bayogqoka ezinye izingubo ukuze baye ezindaweni abantu abavunyelwe kuzo.” 15 Lapho iqeda ukukala indawo engaphakathi yethempeli,* yangikhipha ngendlela yesango elibheke empumalanga, + yayikala yonke indawo. 16 Yakala uhlangothi olungasempumalanga ngomhlanga wokukala.* Lwaluyimihlanga engu-500 ubude kusukela kolunye uhlangothi kuya kolunye. 17 Yakala uhlangothi olungasenyakatho, lwaluyimihlanga engu-500 ubude. 18 Yakala uhlangothi olungaseningizimu, lwaluyimihlanga engu-500 ubude. 19 Yaya ohlangothini olusentshonalanga. Yalukala ngomhlanga wokukala, lwaluyimihlanga engu-500 ubude. 20 Yayikala ezinhlangothini ezine. Yayinodonga nxazonke + olwaluyimihlanga engu-500 ubude nemihlanga engu-500 ububanzi + ukuze kuhlukaniswe phakathi kokungcwele nokusetshenziswa abantu abavamile. +
^ Kubhekiselwa ezingalweni ezinde. Bheka iSithasiselo B14.
^ Ngokwe-Septuagint yesiGreki, “izingalo ezingu-100 ubude.” Umbhalo wesiHebheru ufundeka kanje: “Indlela eyingalo eyodwa.” Bheka iSithasiselo B14.
^ NgesiHebheru, “indlu engaphakathi.”